တပို့တွဲ လပြည့်နေ့ကို မြန်မာ့သနပ်ခါးနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် သနပ်ခါးအသင်း စီစဉ် - Yangon Media Group
တပို့တွဲ လပြည့်နေ့ကို မြန်မာ့သနပ်ခါးနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် သနပ်ခါးအသင်း စီစဉ်
နှစ်စဉ် တပို့တွဲလပြည့်နေ့အား မြန်မာ့သနပ်ခါး နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် စီစဉ်နေ ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသနပ်ခါး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းမှ သိရသည်။ မြန်မာလ တပို့တွဲလပြည့်နေ့သည် ချမ်းအေးလွန်းသော လတစ်လဖြစ်၍ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ခြေတော်လက်တော် မီးရှိန်ခံခဲ့သည်ကို အစွဲပြု၍ ပုဂံခေတ်ကတည်းက ဘုရားစေတီများတွင် သနပ်ခါးထင်း ဖြင့် မီးပူဇော်ခဲ့မှုများရှိခဲ့ပြီး၊ ယင်းကဲ့သို့ ထူးခြားသည့် ဂုဏ်ထူးဝိသေသနရှိသည့် တပို့တွဲလပြည့်နေ့အား မြန်မာ့သနပ်ခါးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် အဆိုပါအသင်းက စီစဉ် နေခြင်းဖြစ်သည်။
”မြန်မာလူမျိုးတွေရင်မှာ သနပ်ခါးကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတတ် အောင် အသိဥာဏ်ထဲရောက်လာ အောင် ရိုးရာပျောက်ကွယ်မသွား အောင်လို့ နေ့တစ်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့စီစဉ်တာပါ။ စီးပွားကူးသန်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုလည်း တွေ့ ဆုံပွဲတစ်ခုမှာ ပြောပြဖူးပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံသနပ်ခါး စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများ အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မိုးက ပြောသည်။
ယင်းသို့သတ်မှတ်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသနပ်ခါးအသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြ အတည်ပြုသွားမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ၂ဝ၁၉ ဇန်နဝါရီလအတွင်း မန္တလေးမြို့ ကျောက်တော်ကြီး ဘုရား၌ကျင်းပမည့် ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာ့သနပ်ခါးပွဲတော်တွင်လည်း နိုင်ငံတော်အဆင့်အကြီးအကဲများကို ဖိတ်ကြား တင်ပြသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သနပ်ခါးကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အရာတော်၊ မုံရွာ၊ ဘုတလင်၊ ယင်းမာပင်၊ ပုလဲ၊ မြင်းမူ၊ ကနီနှင့် ရွှေဘိုမြို့နယ်တို့ တွင်လည်းကောင်း၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ရေစကြို၊ ပခုက္ကူမြို့နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် လင်းခေးမြို့နယ် တို့တွင် စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးကြကြောင်း သိရသည်။
မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲအမီ သောင်ပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှု ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီ
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ကုန်ခါနီး မန်းအိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အရောင်းအဝယ် ပိုဖြစ်လာပြီး ပြည်ကြီးတံခွန်ဘက်ရ?
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ၀တ်ပြုဆုတောင်း အခမ်းအနား ကက်သလစ် ဘာသာဝင် တစ်သိန်းခွဲဝန်းကျင် တက်ရောက်မ
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ခေတ်သစ် ပိုးလမ်းမကြီးသည် အရေးကြီးကြောင်း စင်္ကာပူနိုင်ငံ နန်ယန်း နည်း
အိန္ဒိယမှ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းအတွင်းသို့ အမျိုးသမီးနှစ်ဦး ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ဖြစ်ပွားသော ?
မက္ကဆီကိုတွင် အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာတိုးမြှင့်၊သမ္မတသစ်က ပိုမိုတိုးပေးသွားမည် ဟုဆို
အင်္ဂလန် အသင်းခေါင်းဆောင် ရာထူးအား အလျင်အမြန် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးဖွယ် မရှိဟုဆို
မန္တလေး ကျုံးရေပြင် အတွင်း ယခင် မန်းသီတာဥယျာဉ် အတိုင်း ပြန်လည် တည်ဆောက်မည်
ဟေလီဘောလ်ဒ်ဝင်းနှင့် ပြန်တွဲနေသော ဂျက်စတင်ဘီဘာ
ရွှေစက်တော် ဘုရား၌ ရွှေမိုက် ထုတ်ရာမှ ရွှေ ၂၆ ကျပ်သားကျော် ရရှိ
ရေးမြို့နယ် ချောင်းဖျားဒေသ အတွင်း တရားမဝင် ရွှေကျင်လုပ်ငန်း လာရောက် လုပ်ကိုင်သူများအား အမှု??